के तपाईको दाँत खिइने समस्या छ ? यस्ता छन्, ८ उपचार विधी - नेपालबहस
के तपाईको दाँत खिइने समस्या छ ? यस्ता छन्, ८ उपचार विधी
९ फागुण २०७७ | १४:२३:३० मा प्रकाशित
९ फागुन, काठमाडौं । मुखमा सात सय किसिमका व्याक्टेरिया हुने गर्छ, जसको संख्या करौडोको हाराहारीमा हुने गर्छ । यही व्याक्टेरियाले दाँत तथा मुखको समस्याबाट बचाँउने गर्छ । यदी मुख, दात तथा जिब्रोको सफाई सही तरीकाले नभएको अवस्थामा उक्त व्याक्टेरियाले दात तथा गिजालाई हानी पु¥याउने गर्दछ ।
विशेषगरी, पायरिया भएमा त्यसले दातलाई सर्पोट गर्ने गिजाको हड्डीमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । पाइरिया भएमा दाँतको गिजा पहेलो तथा खराब हुन थाल्छ र त्यसबाट खुन निस्कन थाल्छ । त्यसबाहेक, कलेजोको खराबीका कारण पनि रगतमा लम्लियपन बढ्न थाल्छ । दुषित रक्त अम्लियपनाका कारण दात पायरियाबा टप्रभावित हुने गर्छ ।
पायरिया भएमा सासबाट दुर्गन्ध आउन थाल्छ । गिजा सुनिन थाल्छ । दात कजोर भई हल्लिन थाल्छ । बढी तातो तथा चिसो पेय पदार्थको सेवनले दात सिरिङ्ग हुन थाल्छ । छुँदा समेत गिजा सुनिन थाल्छ । साथै दुई दाँतको बीच ग्याप रहन थाल्छ ।
दाँत सफा, बलियो राख्ने ८ उपाय
१. दाँत स्वस्थ राख्नुहोस्
२. दिनमा दुइपटक ब्रश गर्नुहोस्
३. सफ्ट डिंग्सबाट बच्नुहोस्
४. गुलियो खानेकुरा बाट बच्नुहोस्
५.फलफुलको सेवन गर्नुहोस्
६. पर्याप्त पानी पिउनुहोस्
७. दाँतले अरु काम नगर्नुहोस्
८. नियमित जाँच गराउनुहोस्
दाँतमा कुनै समस्या नआए पनि नियमित रुपमा चेकअप गर्नपर्छ । यदि कुनै समस्या जस्तै दाँत दुख्ने ,गीजाबाट रगत आउने आदि भएमा दाँतको चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । समस्या नभए पनि ६-६ महिनामा जाँच गराउनुपर्छ ।
दाँत स्वस्थ राख्न यी कुराहरु जानीराखौँ २ महिना पहिले
दक्षिणकालीमा टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु ७ मिनेट पहिले
काठमाडौंको तारकेश्वरमा फेरि बर्डफ्लु भेटियो १३ मिनेट पहिले
म्याग्दीबाट चन्द समूहका मुस्ताङ जिल्ला इञ्चार्ज पक्राउ १८ मिनेट पहिले
कलाकार पल शाहविरुद्ध धरान प्रहरी कार्यालयमा उजुरी २१ मिनेट पहिले
एकैपटक ३१ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन १६ घण्टा पहिले
नेप्सेमा तीन वाणिज्य बैंकसहित चार कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत, कुनको कति ? १७ घण्टा पहिले
बुढानीलकण्ठमा सुरू भयाे कांग्रेस पदाधिकारी बैठक १८ घण्टा पहिले
प्राइम कमर्सियल बैंकले फागुन १९ गतेदेखि ऋणपत्र जारी गर्ने, ब्याज कति ? ३ दिन पहिले
काेराेना विरुद्धको खोप लगाउनेकाे संख्या ४ हजार ५ सय नाग्यो २ दिन पहिले
शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मार्दै महेन्द्रनगर २ दिन पहिले
म्याग्दीका ग्रामीण सडकमा कालोपत्रे शुरु २४ घण्टा पहिले
भारतबाट दुई साताभित्र २० लाख खोप आइपुग्‍ने १ हप्ता पहिले
सिमसार र चुरे संरक्षणमा वन मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्ने ३ हप्ता पहिले
अलैँचीबाट उकासिएका लमजुङका कृषक ४ हप्ता पहिले
चन्द्रनहर मर्मत सम्भार नहुँदा किसानहरु चिन्तित ४ हप्ता पहिले
अविरल वर्षाले ओखरेनीका २५ घरपरिवार विस्थापित ६ महिना पहिले
भक्तपुरको नागरिक समाज संजालले दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा के छ ? ७ दिन पहिले
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पलाञ्चोक भगवतीको पूजा–अर्चना १ वर्ष पहिले
चितवनमा थप एक संक्रमितको मृत्यु ५ महिना पहिले